मिटरमा हिड्न नमान्ने ट्याक्सीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही, आनाकानी गरे १०३ मा फोन गर्नु ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
मिटरमा हिड्न नमान्ने ट्याक्सीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही, आनाकानी गरे १०३ मा फोन गर्नु !
काठमाडौँ, ६ वैशाख, उपत्यकामा मिटरमा हिँड्न नमान्ने ट्याक्सी ठाउँको ठाउँ कारबाही कारबाही गर्न थालिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न नमानेको व्यापक जनगुनासो कार्यालयमा आएपछि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो ।
महाशाखाका सहप्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीले मिटरमा हिँड्न नमान्ने दैनिक ५० देखि ७० ट्याक्सीलाई कारबाही गर्ने गरिएको बताए । “पहिले दैनिक १५÷२० ट्याक्सी कारबाहीमा पर्थे, अहिले कारबाही बढेको छ,” – उनले भने । उनले ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न नमाने हटलाइन १०३ मा खबर गर्नसमेत आग्रह गरे ।
मिटरमा हिँड्न नमान्ने ट्याक्सीलाई महाशाखाले रु तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवानासमेत गर्ने गरेको छ । सहप्रवक्ता मरासिनीले मिटरमा हिँड्न नमान्ने ट्याक्सी अनुगमनका लागि दैनिक ३० जनाको जनशक्ति परिचालन गरिएको स्पष्ट पारे ।
महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षमा मिटरमा हिँड्न नमान्ने झण्डै चार हजार ट्याक्सीलाई कारबाही गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०७५, बिहीबार १३:१० 2018-04-19 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged कारबाही ट्याक्सी ट्राफिक प्रहरी
ईयुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने पहिचानवादीहरुको चेतावनी
पार्टी एकता वैशाख भित्रै
ललितपुरको महालक्ष्मी चोकमा मोटरसाईकल एकआपसमा ठोकिँदा ३ जना घाइते
११ बैशाख २०७५, मंगलवार ०९:४५ 2018-04-24
नवलपरासीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
५ बैशाख २०७५, बुधबार ११:५३ 2018-04-18
जीपको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु
१ बैशाख २०७५, शनिबार २१:४७ 2018-04-16
Tags: कारबाही, ट्याक्सी, ट्राफिक, प्रहरी